ဖြိုးမြတ်​​အောင်​အတွက်​ အမှန်​တရားပါ ဆိုပြီး တက်လာတာ....
ဖြိုးမြတ်​​အောင်​က Winner ရရင်​ ဘုရားထီးတင်​မယ်​ ​ပြောတာကို Vote ချုချင်​လို့ ဘာသာ​ရေးကို ခုတုံးလုပ်​တယ်​ ​ပြောကြတယ်​…တကယ်​က သူ့စိတ်​ထဲမှာ Voting ရဖို့ ဒီလို​ပြောမယ်​လို့ ​တွေး​တောင်​ ​တွေးမိမှာမဟုတ်​ပါဘူး…
သူ ထီးတင်​မယ်​လို့ ​ပြောတဲ့ဘုရားဟာ…သူတို့အိမ်​က​နေ လှမ်းကြည့်​ရင်​ မြင်​ရတဲ့ဘုရား… လက်​ရှိ ဘုရားရဲ့ထီး​တော်​ဟာ သူ့အ​ဖေ မဆုံးခင်​က မိသားစု​တွေ တင်​ခဲ့တာပါ…
အခု သူ့အ​ဖေဆုံးလို့ စီးပွား​ရေးကျချိန်​ ထီး​တော်​ကလဲ ပြန်​တင်​ဖို့ လိုအပ်​​နေပြီလို့ သူကြား​တော့…အိမ်​က​နေ ဘုရားကို မြင်​​နေရချိန်​တိုင်း သူ့မှာသာ ပိုက်​ဆံရှိခဲ့ရင်​ သူ့အ​ဖေလှုခဲ့တဲ့ထီး သူပြန်​တင်​ချင်​လိုက်​တာ လို့ စိတ်​ကူးရှိခဲ့မှာ​ပေါ့…ဘယ်​သူမဆို မိဘလှုခဲ့တဲ့ အရာ​လေး​တွေ ပျက်​ဆီးသွားတဲ့အခါ သားသမီးကိုယ်​တိုင်​ ပြန်​ပြုပြင်​တဲ့ အလှုရှင်​ဖြစ်​ချင်​တာ ဆန်းမှ မဆန်းတာ​လေ…ဒါ​ပေမဲ့ သူဆန္ဒကို အရိုးသားဆုံးဖွင့်​​ပြောမိခဲ့တာက သူ့အတွက်​ ​ပြောစရာ​ဖြစ်​​စေခဲ့တယ်​……
ခုအချိန်​မှာ​တော့ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​ကို ပရိတ်​သတ်​​တွေ အား​ပေးကြတာ​ တကယ်​ကို ​ကြောက်​ခမန်းလိလိပါ…သူဒီလို ​အောင်​မြင်​တာလဲ တကယ်​​တော့ သိပ်​​မထူးဆန်းပါဘူး…သူလုပ်​ခဲ့တဲ့ကံ၊ သူထားခဲ့တဲ့ ​စေတနာ​တွေဟာ ဘ၀​တောင်​ မကူးဘဲ လက်​ရှိဘ၀မှာတင်​ သူ့ကို အကျိုး​ပေးတာပါ…
တနှစ်​က (2016 Jun )လ…သူ​ငွေမရှာနိုင်​​သေးတဲ့အချိန်​ သူ့လက်​ထဲ ​ငွေပိုပိုလျှံလျှံ မရှိတဲ့အချိန်​မှာ​တောင်​ လမ်း​ဘေးက စွန့်​ပစ်​ခံအဘိုးအဖွား​တွေကို ​စောင့်​​ရှောက်​ထားတဲ့ ပုံ့တို့ ခိုလှုံရာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်​သာ​လေးကို သူတတ်​နိုင်​သ​လောက်​ လာလှုခဲ့တယ်​…
ပြီး​တော့ သူ့စိတ်​ကူး​လေးကို​တောင်​ ​ပြောပြ​သေးတယ်​…”…အမ​ရေတဲ့ သားအ​ခွေထွက်​၇င်​ အ​ခွေ ၅၀ ကို ခိုလှုံရာအတွက်​ လှုမယ်​ သိလား…”..တဲ့​လေ…​ပြန်​​တောင်​ ​ပြောမိ​သေးတယ်​…”…အမ​လေးဟယ်​လို့ နင့်​အ​ခွေက ဘယ်​​တော့ ထွက်​မှာ မို့လဲလို့…”…
​ခွေမထွက်​လို့ လာမလှုနိုင်​​တော့​ပေမဲ့… အလှုရှင်​​တွေ ခဏခဏ​ခေါ်လာ​ပေးတယ်​…သန့်​ရှင်း​ရေးလုပ်​စရာရှိလဲ လာလုပ်​​ပေးတယ်​…အလှုရှိရင်​လဲ ​အောက်​​ခြေသိမ်း အကုန်​လုပ်​တယ်​….စွန့်​ပစ်​ခံရတဲ့သူ​တွေ့လို့ သွား​ခေါ်ရမယ်​ အဂ္ဂနီ​ရေ လိုက်​ခဲ့ဆိုလဲ…သူ​ရော သူ့အကို​ရော မငြင်းရှာဘူး…ချက်​ချင်းလိုက်​တယ်​…လမ်းလဲ အစစအရာရာ အကုန်​ လုပ်​​ပေးရှာတယ်​..
အခု ၂ နှစ်​အကြာ သူ​အရမ်း​အောင်​မြင်​​နေတာကြည့်​ပြီ…သူ​ပြောခဲ့တဲ့ စကား​တွေ သူလုပ်​ခဲ့တာ​တွေကို ပြန်​စဉ်းစားမိတယ်​…သံ​ဝေဂလဲ ရမိတယ်​…လူတစ်​​ယောက်​ ဘယ်​​လောက်​ပဲ နိမ့်​ကျ​နေပါ​စေ…သူတ​နေ့ ဘာဖြစ်​မယ်​ ဆိုတဲ့ ကံကို ဘယ်​သူမှ မသိနိုင်​ပါဘူး…ကံ ဆိုတာ အလုပ်​မို့ သူလုပ်​ခဲ့တဲ့ ​စေတနာ​တွေဟာ…သူ့ကို ချက်​ချင်းအကျိုး​တွေ ​ပေး​နေတာပါ…ရည်​ရွယ်​ချက်​​ကောင်းနဲ့စခဲ့တဲ့ အနုပညာခရီးဟာ ​အောင်​မြင်​​နေတာပါ….
အခု​အောင်​မြင်​​တော့လဲ သူ ခိုလှုံရာကို လာလှုတယ်​…သူ​နေခဲ့တဲ့​ကျောင်း…သူကိုးကွယ်​တဲ့ ဘုန်းကြီး​ကျောင်းကို သူပြန်​လာလှုတယ်​…ဒါ​တွေဟာ Winner ရချင်​လို့ ဘာသာ​ရေးကို ခုတုံးလုပ်​တာ မဟုတ်​ပါဘူး…သူ့စိတ်​ကူး​တွေ တကယ်​ဖြစ်​လာတာပါ…..
​စေတနာ​ကောင်းရင်​ ကံ​ကောင်းတတ်​တာမို့…MMID မှာ Winner ရသည်​ဖြစ်​​စေ၊ မရသည်​ဖြ်း​​စေ ပရိတ်​သတ်​ရင်​ထဲမှာ​တော့ Winner ဖြစ်​​နေပါပြီ…သူကိုကြည့်​ပြီး ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်​ကာ…အားလုံးလဲ ကံ​ကောင်းကြပါ​စေ…..
ဖွိုးမွတျ​​အောငျ​က Winner ရရငျ​ ဘုရားထီးတငျ​မယျ​ ​ပွောတာကို Vote ခြုခငျြ​လို့ ဘာသာ​ရေးကို ခုတုံးလုပျ​တယျ​ ​ပွောကွတယျ​…တကယျ​က သူ့စိတျ​ထဲမှာ Voting ရဖို့ ဒီလို​ပွောမယျ​လို့ ​တှေး​တောငျ​ ​တှေးမိမှာမဟုတျ​ပါဘူး…
သူ ထီးတငျ​မယျ​လို့ ​ပွောတဲ့ဘုရားဟာ…သူတို့အိမျ​က​နေ လှမျးကွညျ့​ရငျ​ မွငျ​ရတဲ့ဘုရား… လကျ​ရှိ ဘုရားရဲ့ထီး​တျော​ဟာ သူ့အ​ဖေ မဆုံးခငျ​က မိသားစု​တှေ တငျ​ခဲ့တာပါ…
အခု သူ့အ​ဖဆေုံးလို့ စီးပှား​ရေးကခြိနျ​ ထီး​တျော​ကလဲ ပွနျ​တငျ​ဖို့ လိုအပျ​​နပွေီလို့ သူကွား​တော့…အိမျ​က​နေ ဘုရားကို မွငျ​​နရေခြိနျ​တိုငျး သူ့မှာသာ ပိုကျ​ဆံရှိခဲ့ရငျ​ သူ့အ​ဖလှေုခဲ့တဲ့ထီး သူပွနျ​တငျ​ခငျြ​လိုကျ​တာ လို့ စိတျ​ကူးရှိခဲ့မှာ​ပေါ့…ဘယျ​သူမဆို မိဘလှုခဲ့တဲ့ အရာ​လေး​တှေ ပကျြ​ဆီးသှားတဲ့အခါ သားသမီးကိုယျ​တိုငျ​ ပွနျ​ပွုပွငျ​တဲ့ အလှုရှငျ​ဖွဈ​ခငျြ​တာ ဆနျးမှ မဆနျးတာ​လေ…ဒါ​ပမေဲ့ သူဆန်ဒကို အရိုးသားဆုံးဖှငျ့​​ပွောမိခဲ့တာက သူ့အတှကျ​ ​ပွောစရာ​ဖွဈ​​စခေဲ့တယျ​……
ခုအခြိနျ​မှာ​တော့ ဖွိုးမွတျ​​အောငျ​ကို ပရိတျ​သတျ​​တှေ အား​ပေးကွတာ​ တကယျ​ကို ​ကွောကျ​ခမနျးလိလိပါ…သူဒီလို ​အောငျ​မွငျ​တာလဲ တကယျ​​တော့ သိပျ​​မထူးဆနျးပါဘူး…သူလုပျ​ခဲ့တဲ့ကံ၊ သူထားခဲ့တဲ့ ​စတေနာ​တှဟော ဘဝ​တောငျ​ မကူးဘဲ လကျ​ရှိဘဝမှာတငျ​ သူ့ကို အကြိုး​ပေးတာပါ…
တနှဈ​က (2016 Jun )လ…သူ​ငှမေရှာနိုငျ​​သေးတဲ့အခြိနျ​ သူ့လကျ​ထဲ ​ငှပေိုပိုလြှံလြှံ မရှိတဲ့အခြိနျ​မှာ​တောငျ​ လမျး​ဘေးက စှနျ့​ပဈ​ခံအဘိုးအဖှား​တှကေို ​စောငျ့​​ရှောကျ​ထားတဲ့ ပုံ့တို့ ခိုလှုံရာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘှားရိပျ​သာ​လေးကို သူတတျ​နိုငျ​သ​လောကျ​ လာလှုခဲ့တယျ​…
ပွီး​တော့ သူ့စိတျ​ကူး​လေးကို​တောငျ​ ​ပွောပွ​သေးတယျ​…”…အမ​ရတေဲ့ သားအ​ခှထှေကျ​ရငျ​ အ​ခှေ ၅၀ ကို ခိုလှုံရာအတှကျ​ လှုမယျ​ သိလား…”..တဲ့​လေ…​ပွနျ​​တောငျ​ ​ပွောမိ​သေးတယျ​…”…အမ​လေးဟယျ​လို့ နငျ့​အ​ခှကေ ဘယျ​​တော့ ထှကျ​မှာ မို့လဲလို့…”…
​ခှမေထှကျ​လို့ လာမလှုနိုငျ​​တော့​ပမေဲ့… အလှုရှငျ​​တှေ ခဏခဏ​ချေါလာ​ပေးတယျ​…သနျ့​ရှငျး​ရေးလုပျ​စရာရှိလဲ လာလုပျ​​ပေးတယျ​…အလှုရှိရငျ​လဲ ​အောကျ​​ခွသေိမျး အကုနျ​လုပျ​တယျ​….စှနျ့​ပဈ​ခံရတဲ့သူ​တှလေို့ သှား​ချေါရမယျ​ အဂ်ဂနီ​ရေ လိုကျ​ခဲ့ဆိုလဲ…သူ​ရော သူ့အကို​ရော မငွငျးရှာဘူး…ခကျြ​ခငျြးလိုကျ​တယျ​…လမျးလဲ အစစအရာရာ အကုနျ​ လုပျ​​ပေးရှာတယျ​..
အခု ၂ နှဈ​အကွာ သူ​အရမျး​အောငျ​မွငျ​​နတောကွညျ့​ပွီ…သူ​ပွောခဲ့တဲ့ စကား​တှေ သူလုပျ​ခဲ့တာ​တှကေို ပွနျ​စဉျးစားမိတယျ​…သံ​ဝဂေလဲ ရမိတယျ​…လူတဈ​​ယောကျ​ ဘယျ​​လောကျ​ပဲ နိမျ့​ကြ​နပေါ​စေ…သူတ​နေ့ ဘာဖွဈ​မယျ​ ဆိုတဲ့ ကံကို ဘယျ​သူမှ မသိနိုငျ​ပါဘူး…ကံ ဆိုတာ အလုပျ​မို့ သူလုပျ​ခဲ့တဲ့ ​စတေနာ​တှဟော…သူ့ကို ခကျြ​ခငျြးအကြိုး​တှေ ​ပေး​နတောပါ…ရညျ​ရှယျ​ခကျြ​​ကောငျးနဲ့စခဲ့တဲ့ အနုပညာခရီးဟာ ​အောငျ​မွငျ​​နတောပါ….
အခု​အောငျ​မွငျ​​တော့လဲ သူ ခိုလှုံရာကို လာလှုတယျ​…သူ​နခေဲ့တဲ့​ကြောငျး…သူကိုးကှယျ​တဲ့ ဘုနျးကွီး​ကြောငျးကို သူပွနျ​လာလှုတယျ​…ဒါ​တှဟော Winner ရခငျြ​လို့ ဘာသာ​ရေးကို ခုတုံးလုပျ​တာ မဟုတျ​ပါဘူး…သူ့စိတျ​ကူး​တှေ တကယျ​ဖွဈ​လာတာပါ…..
​စတေနာ​ကောငျးရငျ​ ကံ​ကောငျးတတျ​တာမို့…MMID မှာ Winner ရသညျ​ဖွဈ​​စေ၊ မရသညျ​ဖွျး​​စေ ပရိတျ​သတျ​ရငျ​ထဲမှာ​တော့ Winner ဖွဈ​​နပေါပွီ…သူကိုကွညျ့​ပွီး ကံ ကံ၏အကြိုးကို ယုံကွညျ​ကာ…အားလုံးလဲ ကံ​ကောငျးကွပါ​စေ…..